आज २०७७ कात्तिक १७ गते सोमबारको राशिफल - गोकर्णेश्वर खबर
आज २०७७ कात्तिक १७ गते सोमबारको राशिफल
गोकर्णेश्वर खबर१७ कार्तिक २०७७, सोमबार ०६:०६ मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) ५२ पाठक संख्या
आज २०७७ कात्तिक १७ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइने छ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्‍याउनेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ।
आज २०७७ मंसिर ९ गते मंगलबारको राशिफल
आज २०७७ मंसिर ८ गते सोमबारको राशिफल
आज २०७७ मंसिर ७ गते आइतबारको राशिफल
‘गोकर्णेश्वरका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा’ सार्वजनिक
आज २०७७ कात्तिक २४ गते सोमबारको राशिफल